Ayyaana ijoollee Irreecha dura kabajaman: Ukee, Taaboree - BBC News Afaan Oromoo
Image copyright NEMERRA KUMESA/FB
Sirna Gadaa keessatti hunduu gahee fi itti gaafatamummaa ofii akkuma qabu, ijoolleenis sadarkaa Sirna Gadaa keessatti dirqama qaban alatti ayyaanas qofaatti kabajatan qabu.
Waqtii gannaa kessaahuu baatii Hagayya keessa bakka hundatti tokko ta'us baatu ijoolleen horii tiksuu, warraaf ergamuufi kaaniin ganna dabarsu.
Sirna Gadaa keessatti hunduu gahee fi dirqama ofii akkuma qabu, ijoolleenis sadarkaa Sirna Gadaa keessatti dirqama qaban alatti ayyaanas qofaatti kabajatan qabu.
Ayyaanota Irreecha dura kabajaman keessaa tokko immoo ayyaana ijoollee dha. Kunis, 'guyyaa bilisummaa' isaaniif eeyyamamedha jedhu hayyoonni.
Aadaa Oromoo keessatti ayyaanota ijoolleen qaban keessaa Ukee, Taaboree, akkasumas Buhee jedhamee kan waamamuus ni jira. Maqaa biraatin kan waamaman jiraachuu malu jedhu hayyoonni.
Ayyaanni ijoollee kuni wagga waggaan A.L.I Hagayya bultii 13 kabajama. Ayyaanni kuni gara caalu Oromoo Tuulamaa biratti Ukee jedhamuun waamama. Galgala kan kabajamu yoo ta'u ijoolleen loon ni faarsu.
Akkasumas ulee qabatanii gandarra deemaa warra qe'ee maqaa gaariin waamaa, walaloon bareechaa galateeffatu.
Ayyaanni kunis ijoolleen hiriyyummaa akka cimsatan, qe'eefi naannoo isaanii akka baran, dandeetii walaloo walitti fiduufi weellisuullee akka cimsatan gargaara.
Naannodhuma Finfinnee Aanaa Walmaraa ganda barfataa kan jiraatan maanguddoon umrii 60 Obbo Caalaa Fayyisaan yeroo ayyaana kanaa waan qixaa'u akkanaan dubbatu.
''Yeroo ayyaana Ukee daabboo bixxilleetu godhama. Maatiinis isa nyaatu. Ijolleen xixiqqoos waggaadhuma waggaadhaan siribiti. Yoggaa isaan dhufan daabboo mulmulee bixxillee sana kennuf,'' jedhan.
Sirba sirbanif ijoolleen daabboo qofa fudhatanii hin deebi'an. ''Ijoolleenis warra isa kenneef eebbisanii deemu,'' jechuun himu Obbo Caalaan.
Gaafa ayyaana kanaa mana keessatti nyaanniifi dhugaatiin kaanillee qophaa'ee maatiin akkasumas firri ni sooratu.
Ijoolleen sirba qofa miti qacceellee foo'ani qopheessanii gaafa walitti dhufan dhukaasu. ''Qawwee caalaa sagaleen isaa dhagahama,'' kan jedhu Obbo Caalaan.
Qeeroon Sinboonaa Didaa immoo Godina Lixa Shawaa magaalaa Mogor jiraata. Akkuma dargaggoo kaanii ijoollummaatti ayyaana ijoollee kabajeera.
Yaa dureessakoo doottinaa (2)
Boolloo xaddee doottinaa
Yaa dureessakoo doottinaa
Ati maal dhabdee doottinaa …
Akkasumas, ''Ofee dhufe yaa dureechakoo loonan tiksa karra naa bani,'' jedhanii ijoolleen sirbu kan jedhu dargaggoon kuni amma garuu daabboo osoo hintaane gatii ijoolleen sirbanif waan biraa argatu.
''Amma garuu erga barri jijijjiirame amma maallaqa kennufi. ''
Yunivarsiitii Bulee Horaa irraa qorannoo waa'ee Ukee barruu 'Jornaal of Inoveeshin ende Saayintifik Riisarch' jedhamu irratti addatti maxxanasaniin waan ijoolleen sirban akkanaan kaa'u.
"Ukee yaa ukee
Ukee bara kaanii
Kan miilli dagaanii
Ukee bara quufaa
Ayyaanni ijoollee kuni gara caalu Oromoo Maccaa biratti Taaboree jedhamee waamama. A.L.I waggaa waggaatti Hagayya bultii 13 kan kabajamu yoo ta'u gara Godina Horro Guduruu Wallaggaa keessa Hagayya bultii 12 kabajama.
'Kuni dhaha waliin walqabata,' jechuun himu barreessa kan ta'an Obbo Charinnat Waaqoyyaa.
Ayyaanni kunis akkuma Ukee ijoolleetu kabaja. Haa ta'u malee, Ukee waliin xiqqoo garaagarummaa qaba.
Taaboree kabajuuf godoo ijaaruun barbaachisa. Ijoolleen qe'ee tokko jiran ofuma isaanii muka qe'eetti dhihoo jiru kanneen akka reejjii, anfaarree, abbayyii, ceekaafi kaan muranii godoo ijaaru.
Image copyright Mayor office of Addis Ababa
Ayyanni kuni akkuma Ukee gara galgalaa kan kabajamu yoo ta'u godoo sana keessatti nyaanni akka cumboo, cororsaa marqaa, qorii fi kaan ijoolleen nyaachuu danda'an dhihaatee ijoolleen akka sooratan ta'a.
Ayyaana kana irratti ijolleen umriin isaanii 9 - 16 ta'an irratti ni hirmaatu kan jedhan barreessaa kitaabaa kan ta'an Obbo Charinnati Waaqoyyaati.
Qorannoo kaan irratti immoo ayyaanni Taaboree da'immanin akka kabajamu kan eeran jiru.
Ayyaana kana irratti iIjoolleen erga sooratani booda horii sirbaan galateeffatu.
Taaboree taaboree sa'aa
Taaboree taaboree re'ee
Taaboree taaboree hoolaa … jechuun horii hunda waliin gahu jedhu Baay'isaa Tolasaan qorannoo digirii lammaffaaf hojjetaniin.
Mijuu maatiin dhiheessannis maatiin ni sooratu. Ijoolleefillee kennamuu baatu akkuma Ukee dhugaatiin akka farsoo, daadhii fa'illee ni qophaa'a.
Kanaan alatti garuu ayyaanni kuni ayyaana ijoolleen sadarkaa isaanii adda baasuuf itti fayyadamanidha jedhu barreessaa Charinnat Waaqoyyaan.
''Taaboreen ayyaana ce'umsaati. Fakkeenyaaf inni dhiiraa godoo sana cabsee fiigee osoo hin qabamin yoo gindii abbaa isaa qabate, durbis akkasuma qodaa bukoo yoo qabatte bara dhufu ayyaanicha hin kabajani jechuudha,'' jedhan.
''Reettii, hoolaa ykn jibichi ni qalama. Namoonni gurguddaas irratti hirmaatu ijoollee qofa miti,'' jechuun qofaatti maatiin ayyaanicha irratti hirmaatu jedhu barreessaa Charinnat.
Ayyaanni Taaboreefi Ukee waan isaan wal fakkeessu baay'ee qabaatanis waan itti adda ba'anis qabu. Isaan keessaa tokko, ''Ayyaanni Taaboree godoo barbaada,'' jedhu Dr Darajjeen.
''Ayyaanni Taaboree walabummaas agarsiisa. Seera ittin bulmaataa akkaataa ittiin raawwatan Ukee caalaa qaba natti fakkaata.''
Baay'isaa Tolaasaa immoo qorannoo isaanii keessatti Ukeenillee godoo akka qabu eeruun sagantaan haati ijoollee itti eebbistu akka jiru barreessaniiru.
Goodayyaa suuraa Ayyaannii Ukee/Taaboree/Buhee barana dallaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetti kabajame irratti bulchaan magaalatti qaccee dhukaasaniiru
Gama kaaniin, ayyaanni Ukee bakkeewwan tokko tokkotti Buhee jedhamuun waamama. Ayyaana Taaboree ykn Ukee bifa amantii qabuun Manni Amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaas ni kabajji.
Ayyaanniifi aadaan wal keessa akka jiru Yunivarsiitii Jimmaatti muummee Fookiloorii kan hundeessan Dr Darajjee Fufaan dubbatu.
''Aadaa, amantii, ammayyummaan walkeessa jira. Tokko kan biraarraa fudhachuu danda'a. Aadaan Oromoo amantiis, aadaas, sirna gadaa wajjiin walqaqqabateedhuma jira.''
Sababoota kanaaf, ayyaanonni hunduu bakka durii hin jirani. Ammayyummaa, amantii, guddina magaalotaafi kaan waliin waan makatees qaba.
Akka fakkeenyaatti Obbo Caalaan bakka isaan jitraatanitti gaafa ayyaana Ukee ijooleen ''ammallee Afaanuma Amaaraatiin sirbu,'' jechuun BBC'tti kan himan.